Al-Shabaab oo la sheegay in qeybo ka mid ah Muqdisho ay ka mamnuucayn Ciyaarista Kubadda Cagta. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAAl-Shabaab oo la sheegay in qeybo ka mid ah Muqdisho ay ka mamnuucayn Ciyaarista Kubadda Cagta.
Al-Shabaab oo la sheegay in qeybo ka mid ah Muqdisho ay ka mamnuucayn Ciyaarista Kubadda Cagta.
March 6, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa soo saaray amar ay qeyba ka mid ah degmooyinka gobalka Banaadir uga mamnuucayn Ciyaarsita kubadda Cagta.–
Milkiiliyaasha garoomada iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ee xaafadaha waqooyi ee gobalka Banaadir ayaa Warqaat.Com u xaqiijiyay in amar kaan lala wadaagay dadka iskaleh Garoomada Salaxa ee lagu Ciyaaro kubadda Cagta kuwaas oo dhaqan geliyay amarkii Al-Shabaab ee soo baxay maalmo ka hor.
Dadka aan la hadalnay oo ka gaabsaday in aan adeegsano magacyadooda iyo Codkooda ayaa KNN u sheegay in degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid iyo Heliwaa laga mamnuucay Ciyaarista Kubadda Cagta waxaana fariintaan lala wadaagay oo kaliya milkiiliyaasha Goormada Salaxa ee degmooyinka aan soo sheegnay.
Faah faahinta la helayo ayaa sheegaysa in Garoomada Ciyaaraha laga joojiyay ee ku yalaan wixii ka dambeeya wadda 30-ka ee magaalada Muqdisho, waxaana milkiiliyaasha qaar looga yeeray gobalka Shabeelaha Hoose xarun ay Al-Shabaab ku leeyihiin.
Al-Shabaab ayaa dadka iskaleh Goormada Kubadda laga joojiyay oo ay qaarkood la kulmayn ku qanciyay in aysan ka hor imaanin go’aanka ka soo baxay Al-Shabaab balse ay raadsadaan badalka oo ganacsi waxayna go’aankooda u cugsadayn in sharci darro tahay Ciyaaraha lagana keenay dhaqamo shi-sheeye.
Kulanka Al-Shabaab iyo Qaar ka mid ah Ganacsatada garoomada ayaa ka dhacay Degmada Toora-toorow ee gobalka Shabeelaha Hoose sida ay sheegayn ilo lagu Kalsoon yahay.
Amarka Al-Shabaab ayaa saameeyay wax ka badan ilaa 20 Garoon oo Fuustal ah kuwaas oo ku yaala Yaaqshiid, Kaaraan iyo degmada Heliwaa ee gobalka Banaadir.
Sidoo kale amarka ayaa saameeyay Boqolaal ka mid ah dhalinyarada Kubadda Cagta ee ku nool xaafadaha Garoomada laga mamnuucay waxaana sidoo kale dhalinyarada soo wajahay cabsi dhinaca amniga ah.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay degmada Heliwaa ayaa Idaacadda Kulmiye u xaqiijiyay in Garoomada la xiray mid ka mid ah uu leeyahay Mas’uuliyiinta degmada Heliwaa ee gobalka Banaadir gaar ahaan xubnaha dhinaca Sports-ka ee degmadaasi.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Booliiska iyo Nabad Sugid Soomaaliya oo aan la xariirnay ayaa ka gaabsaday in ay faah faahin ka bixiyaan amar-ka Al-Shabaab ee la dul-dhigay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho.
Dhinaca Kale Xaafado ka mid ah degmada deyniile ee gobalka Banaadir ayaa laga mamnuucay Leerarka ama nalalka lagu dhajiyo banaanka Guryaha iyo waddooyinka mara xaafada ka mid ah degmadaasi.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dhalinyaro ka tirsan Al-Shabaab ay jebiyeen leerar badan oo ku yaaala degmada Deyniile ee gobalka Banaadir,milkiiliyaasha iyo dadka kireesta qaar ka mid ah Guryaha degmada Deyniile ayaa sheegay in ay lagu amray in ay jebiyaan ama ay furaan leerarka banaanka ee degmadaasi.
Magaalada Muqdisho waxaa si buuxda gacanta ugu haayo Dowladda Soomaaliya balse dad badan ayaa aaminsan in Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin Xaafadaha waqooyi ee gobalka Banaadir, Dowladda Soomaaliya ayaa xil weyn iska saarin amaanka Guud ahaan magaalada Muqdisho.
Dowladda ayaa la sheegay in ay kaliya xooga saarto amaanka xaafado gaar ah oo ay dagan yihiin mas’uuliyiinta Dowladda iyo goobaha ay ka agdhaw-yihiin Xarumaha Hayadaha Dowladda iyo Saldhigyada Ciidamada Soomaaliya kuwaas oo ku yaala degmooyin Kooban.
Sawirro:-Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Oo Kulan Wadatashi Ah La Yeelatay Maamulka Gobolka Banaadir
DEG DEG:Gabadhii Hargeysa ugu xidhnayd Soomaalinimo Jacaylka oo Xukunkii ugu adkaa wajahday & Sideed sano xabsi ah…..
45,093 total views, 2,043 views today
45,093 total views, 2,043 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
45,164 total views, 2,042 views today
45,164 total views, 2,042 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
45,177 total views, 2,041 views today
45,177 total views, 2,041 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
45,199 total views, 2,041 views today
45,199 total views, 2,041 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,235 total views, 2,044 views today
45,235 total views, 2,044 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]